Golaha Sare Culumaa’udiinka Ahlusuna oo cambaareeyay qaraxyadii Ismiidaaminta ee Muqdisho ka dhacay – idalenews.com
Bayaan ka soo baxay Golaha sare Culumaa’udiinka Ahlusuna Wal-jameeca ayaa lagu cambaareeyay qaraxyadii ismiidaaminta ee todobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho, iyagoo ka digay fidnada ka dhalan karta.
Goluhu ayaa sheegay in Diinta islaamka aanay wax raad ah ku laheyn, isla markaana ruux naftiisa gooyo uu Ahlu Naar yahay, dhiig muslim oo uu daadayo aan wax janno ah lagu galeyn.
Bayaanka ayaa si xoogan waxaa lagu cambaareeyay is qarxintii isniintii la soo dhaafay ka dhacay agagaarka Ex Fiyoore, oo ruux naftii halige ah ku xasuuqay dad aan waxba galabsan, waxaana Culimada ku tilmaameen dadkii sida xaqdarada ku dhintay kuwo Shahiid ah.
“Dhagar qabihii umadaas wadada mareysay xasuuqay waxaa uu la tagay fasahaadki uu umada ku hayay, naftiisa uu gooyay waa Ahlu-naar, umadii kale ee meeshaas lagu baabi’iyay waa shahiid”ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay.
Sidoo kale Culimada waxay cambaareeyeen naftii halige shalay isku qarxiyay Suuqa Bakaaraha, waxaana ay tibaaxeen in dhibkii uu waday uu keligiis Alle ku koobay.
Bayaanka Culimada ayaa lagu sheegay inay jiraan dhalinyaro maskaxda laga xaday oo la daroogeeyay, loona sheegay been hadii ay is qarxiyaan inay janno galayaan, waxaana ay cadeeyeen in ruux daadiya dhiiga qof muslim ah aan Jano lagu galeyn, kaba sii daran hadii naftiisa uu gooyo.
Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta kormeerkiisa u horeeyay ku tagay Dekeda Muqdisho